Qeybta:Dayactir Saddex-bilood ah2 min akhris
Horumarinta Iskuullada Waxbarashada ee McKnight's 1-Quarter-2018 Fursadaha Muhiimka ah
Hay'adda McKnight Foundation ayaa abaalmarin lacageed dhan 36 bilyan oo doolar ku bixisay lacag dhan $ 25.3 milyan lacagtii kobaca bilawgii sanadka 2018. $ 25.3 milyan oo la ansixiyey, $ 2.6 milyan ayaa u tageen barnaamijkayaga Waxbarashada, kaas oo taageera dadaalada lagu xakameynayo fursadaha kala duwan ee qoysaska iyo taageerada barayaasha kala duwan. Baro wax badan oo ku saabsan barnaamijka qaabka iyo sida loo codsado si loogu maalgeliyo si loo hormariyo xirfadda waxbarasho ama la galo qoysaska.
Waxaan caddeyneynaa seddex ka mid ah deeqda la ansixiyay ee koontadan hoos ku qoran; liiska buuxa ee deeqaha la ansixiyey ayaa laga heli karaa noo keydka macluumaadka.
MN Soo noqoshada, oo ah urur dhexdhexaadin ah oo matalaya iskudhaf ka badan 80 dugsi, aasaas iyo hogaamiyayaal bulsheed, ayaa helay $ 2 milyan muddo laba sano ah. Xubnaha isbahaysigu waxay ka shaqeynayaan istiraatiijiyad istiraatiiji ah oo lagu muujiyay hagaajinta iskuulada, sidaas awgeedna u xidhaan farqiga fursadaha ilaa 30,000 oo arday oo dhaqan ahaan aan waxtar u lahayn Minneapolis.
Istaraatiijiyadu waxaa ka mid ah kordhinta tirada macalimiinta aan caadiga ahayn, macallimiinta iyo hoggaamiyeyaasha kala duwan, kobcinta ka qaybgalka waalidka qaddarinta, u doodista siyaasadda taageerada dadweynaha, iyo ka caawinta dugsiyada helitaanka goobo tayo leh.
Habeenada waalidiinta / macallinka kooxda ee Dugsiga Hiawatha | credit credit: Dugsiga Hiawatha
McKnight ayaa sidoo kale la siiyay $ 300,000 laba sano ka badan Dugsiyada Hiawatha, shabakad dugsi dadweyne oo u adeega ardayda laga bilaabo kindergarten illaa dugsiga sare ee koonfurta Minneapolis. Iyada oo taageero ka heleysa McKnight, Hiawatha waxay ballaarin doontaa dadaal lagu kordhinayo hoggaaminta waalidka ee shabakaddeeda iskuulka iyo taageeridda waalidiinta si ay udoodsiiyaan natiijooyin wax ku ool ah oo ardayda oo dhan ka dhex muuqda magaalooyinka Twin Cities
XAASHIINTA, siyaasad furan oo wada-hawlgal ah, waxay heshay $ 330,000 laba sano ka badan. Si buuxda u falanqeeya diyaarinta macalinka iyo dib-u-habeynta shahaadada, EdAllies waxay horumarinaysaa siyaasadaha ardayda horay loo dejiyey, ka horjoogsanaya caqabadaha haysta iskuulada iyo barnaamijyada guuleysta, iyo in lagu dhiirigeliyo wada-hadallada wada-hadalka ah ee ku saabsan waxa suurtagal ah ardayda.
"Ilmo kastaa wuxuu u qalmaa helitaanka iskuulo tayo sare leh oo dhaqan ahaan wax ku ool ah," ayuu yiri Debby Landesman, madaxa guddiga madaxa banaan ee McKnight Foundation. "Waxaan aaminsanahay in istaraatiijiyadayadu ay gacan ka geysan doonto abuuritaanka xaalado guusha ardayga."
Warka kale, waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno Molly Miles oo ah sheekadayada dijitaalka ah ee kowaad. Sawirqaade xirfad leh, naqshadeeyaha garaafka, tifaftiraha fiidiyowga, iyo maareeyaha warbaahinta bulshada, waxay abuurtaa waxyaabo badan oo maado ah si ay u caawiyaan dhalinta McKnight ee hadafyada iyo horumarinta hawlgalkeena.